सिट्रन सि-5 नेपाली बजारमा - Dainik Online Dainik Online
सिट्रन सि-5 नेपाली बजारमा
प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७८, मंगलबार १२ : १३
फ्रेन्च मोटर कंपनी पुजोको नेपालका लागि अधिकारिक विक्रेता साँग्रीला मोटर प्राइभेट लिमिटेडले अर्को लोकप्रिय उत्पादन सिट्रनको विक्री प्रारम्भ गरेको छ । यस अघि पुजोको विक्री साँग्रिला मोटर प्रा.लि. ले सन् २०१७ देखि नेपालमा गर्दै आएको थियो । सिट्रन मोटर विगत १०० वर्ष भन्दाबढी समयदेखि उत्पादनमा आई सवारी साधनको क्षेत्रमा नयाँ इतिहास बनाएको छ । सिट्रनको स्थापना सन् १९१९ मा भएको थियो र सन् १९३४ सिट्रनले सर्वप्रथम Traction Avant मोडलको कारबाट मोटर जगतमा सर्वप्रथम फ्रन्ट व्हील ड्राइभ र फोर व्हील इन्डिपेन्डेन्ट सस्पेन्सन जस्तो आधुनिक प्रविधि भित्राएको थियो जुन वर्तमानमा सबै कारमा जडान हुन्छ ।
सिट्रनकोे सोरुम अहिले थापाथलीमा राखिएको छ, जुन फ्रेन्च भाषामा घर भनिने ‘ला मेजोँ’ कलामा आधारित छ । यो नेपालमा भएका अरु सोरुमको तुलनामा आफ्नै मौलिकतायुक्त छ । सिट्र«न C5 Aircross फ्रान्सबाट आयात गरिएको नेपालको पहिलो सिट्रन एस यू भी हो । C5 Aircross लाई १.६ लिटर पेट्रल इन्जीनले शक्ति प्रदान गर्दछ जसले १६५ एच.पि. को पावर र २४० एन.एम को टर्क प्रदान गर्दछ । सिट्रनको सबभन्दा मुख्य विशेषता यसको आरामदायी सवारी हो । यसमा जडान गरिएका Dual Progressive Suspension Cushion ले सिट्रन C5 Aircross चलाउने र यसमा यात्रा गर्नेलाई अत्यन्त आरामदायी अनुभव गराउँछ जसलाई कंपनीले फ्लाइङ्ग कारपेटको संज्ञा दिएको छ ।
C5 Aircross को अग्रीम बूकिङ्ग प्रारंभ भएको छ र हालको मूल्य रु. १ करोड ३५ लाख निर्धारण गरिएको छ । यही कम्पनीको सिट्रन C3 गाडी भारतमा तयार भई सन् २०२२ को पहिलो चौमासिकमा र फ्रान्समा बनेको C4 EV गाडी सन् २०२२ को मध्यतिर नेपाली बजारमा आउने छ ।